Companylọ ọrụ ahụ anọwo kemgbe 1963 ma nwetala ezigbo aha n’etiti ọha na eze. N'ihi mmụba ọ na-ewu ewu, ụlọ ọrụ ahụ nwere karịa 1.000 ndị ọrụ na karịa 500.000 ndị ọrụ nọ n'ọrụ.
Ọ bụ ezie na ahụmịhe bara ụba, ika dị na Spain n'ọnwa gara aga. Na mba anyị, nke General Directorate nke amblinggba Cha cha, kwadoro (CHINEKE) bụ njedebe nke data, yabụ anyị nwere ike ịtụkwasị obi nchekwa nke ikpo okwu. Egwuregwu egwuregwu Spanish kachasị amasị na ọbụna ihe na-atọ ụtọ na Paris karịa amụma ndị nwere ike idozi Eurovision. Na usoro nke ọ bụla, nhọrọ nke ihe omume na asọmpi dịkwa obosara karịa nkezi.
ụlọ ọrụ scrikina, na ị nwere ike ịhụ ọkara narị afọ nke akụkọ ihe mere eme, Ọ bụ otu n'ime Paris a ma ama ma nwee ọganihu, enweghị ike ileghara ihe nkiri Spanish.. Na nyocha anyị, anyị na-ahụ ntụrụndụ dị iche dị iche iche betsson.es na nkwalite akwadoro maka anyị. A zaa ajụjụ niile dị mkpa gbasara ahụmịhe egwuregwu ịntanetị nke Paris.
Betsson NA PERU
Onye ndu ụwa niile nke Betsson na egwuregwu egwuregwu na Paris kpebiri ịbanye n'ahịa Peruvian 2008 maka egwuregwu ịkụ nzọ egwuregwu n'ịntanetị n'ịgba ọsọ na Peru na Paris, ọkacha mmasị na Paris.
Ọ ga-anọ na Peru ihe karịrị afọ iri, ọnụ ọgụgụ ahụ jisiri ike nọrọ n'etiti ndị egwuregwu ịkụ nzọ kachasị mma na-enye azụmahịa na nkwalite kachasị mma, onyinye ma na-enye ọtụtụ egwuregwu cha cha n'ịntanetị, dị ka ọtụtụ puku ad oghere, blackjack na ndụ roulette.
mmelite ọdịnaya kwa izu Betsson Casino na-enye nkwalite ọhụụ na ịkụ nzọ egwuregwu.
Betsson na-enye nkwalite nkwalite ọhụụ maka ndị egwu ọhụrụ ma na-anọkarị na mgbasa ozi niile, tinyere akwụkwọ akụkọ, redio, televishọn, na mgbakwunye na ịkpọ aha onye ọkpụkpọ egwu mbụ na bọl Nolberto Solano dị ka onye nnọchi anya Peru.
usoro egwuregwu: nhọrọ egwuregwu na ụdị paris
A kọwara ha dịka “egwuregwu ọhụrụ ga-agbanwe ụzọ ịhụ egwuregwu dị na Spain” na eziokwu bụ na ị gaghị ahụ ebe ọbụla na katalọgụ karịa 4.000 ahịa. Sportgba egwuregwu kachasị amasị gị adịghị mfe ma dị mfe! Ma obughi egwuregwu Paris nile, lee, anyị nwekwara ike nzọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, TV na ihe nkiri ma ọ bụ ihe omume ama ama (dịka Eurovision, dị ka m kwuru n’elu).
Karịa 40 egwuregwu, bọọlụ nwere ọrụ doro anya, nke na - emekarị site na ọnụ ụzọ ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ọha na eze chọrọ bọl, Nhọrọ dị iche oh! N'egwuregwu mbu nke nkewa, Nọmalị, enwere ihe karịrị narị narị atụmatụ dị iche iche maka ihe omume ahụ.. Dabere na nsonaazụ nke oke mgbu ị nwere ike iru nso 200 ụdị paris.
Banyere nkesa nke ọdịnaya na akuku aka ekpe elu, enwere nyocha maka ihe omume ahụ. Site n'ike iji nọrọ na Paris n'oge egwuregwu, ma ọ bụ ihe omume na ndụ mgbe a nwụsịrị ma ọ bụ tupu Paris apụta n'ihu egwuregwu ahụ.
Na kọlụm na-esote na ụdị usoro a ma ọ bụrụ na pịapị na ya, ị ga-ahụ kọlụ ọzọ nke ndepụta nke ahịa dị na ya. Egbu, n’akụkụ aka nri nke enyo, enwere dere, ya na nhọrọ nke akara akara na ọnụọgụ Paris.
Eweghachiri, lee ị nwere ike ibu amụma banyere egwuregwu: bọl, Bọọlụ Nkata, volleyball, ice hockey, baseball, Usoro 1, golf, tenis, bọọlụ aka na ndị ọzọ. Paris bụ ọgbakọ kachasị ewu ewu n'ụwa dịka Champions League, Njikọ Champions, Premier League, NBA… Y, n'ezie, ime ihe na Paris, dika emebere ya. Lee n'okpuru maka nwoke Paris ahụ na Betsson, otu n’otu.
Betsson na-enye ndị ọrụ ọhụụ ohere okpukpu abụọ nke nkwụnye ego mbụ nke S / 300 ihe $ 100 (nanị ego maka ndị egwuregwu si na Peru), dabere na nha nke tank nke abụọ, na-enye egwuregwu na-akwụghị ụgwọ nke enwere ike iji ya maka egwuregwu bọọlụ kachasị mma, Egwuregwu Tenis na egwuregwu karịrị egwuregwu kachasị amasị gị.
Iji mee ka njikọ ahụ rụọ ọrụ ị ga-enwerịrị S / 30 ihe 10 $, na-eji otu uzo ugwo, PagoEffective PagoDirecto, MasterCard na Visa.
A na-atụ aro ka ịgbalite ego ahụ tupu nzọ, etinyekwala ego ọzọ iji mee ka ego ahụ rụọ ọrụ.
Iji ruo eru maka ego a, ị ga-akpọrịrị ego ego azụ ma kpọọ egwuregwu ịkụ nzọ egwuregwu, Usoro ịgba chaa chaa Paris na POS anaghị anabata nkwado nkwalite. Ọ bụrụ n’ikpebie iwepu ọnọdụ nke ịnata ọbụna ego na ego, a ga-akagbuo ya na uru nke adịchaghị na itinye ego a ga-eji gbanwere..
Ihe ọzọ a chọrọ bụ ego ego ugboro isii, na-eburu, ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na njikọ larịị S / 20 nata S / 20 x 6 = S / 120 bụ nti, nọmba a kwesịrị ịhọrọ steeper 50 Oge ego nke January nwere ike ị nweta mmeri ikpeazụ.
A ga-eziriri ọnọdụ ndị a niile n'ime 30 ụbọchị tupu ndọrọ ndọrọ. Ọ bụrụ na oge ụfọdụ, ego ọnụọgụ ego ka ga-ewepụ.
Ndụ na Paris
Site na paris, tinyere ndụ n'oge esemokwu ahụ (ihe mgbaru ọsọ, kaadị, wdg), ya na oge ijikwa ihe omume dị mkpa. Dika ntughari ngwa-ngwa n’etiti ihe abuo a (kaadị, nkuku, obi ọgụ, gbaa ihe mgbaru ọsọ, wdg).
Na akụkụ aka nri nke onyonyo na-egosi mpaghara ihe omume dị mkpa dị ka mwakpo, mana ihe akaebe a abachaghị uru.
Mgbe osimiri ahụ batara n'etiti etiti ahụ ka egwuregwu ahụ na-aga n'ihu. Na mkpokọta, ngalaba a bụghị naanị ikwenye ndị ọzọ; atụnyere ndị na-asọmpi ya, ozi ezughi ezu ebe a.
Nye William Hill onwe ya, Betfair y Bwin, ị nwere ike ịgbaso mgbasa ozi dị ndụ na ihe onyonyo TV.